Brass Handle, Brass Knob, Dhonza Handle - Zhangshiwujin
Knurled Teerero T Bar Mubhedha Wokurara Mukombe Wepabati P ...
Ongororo Yekukurumidza Nongedzo Type: Ificha Handle & Knob, Ificha Handle & Knob, Chiedza chakasarudzika chiitiko Mheji kurongedza: Y Nzvimbo Yepakutanga: Zhejiang, China Brand Zita: KOPPALIVE Model Nhamba: 6130-T Chinyorwa: Brass Usage: ...
KOPPALIVE Kusimudzira Luxury Yazvino Kugadzira Bedroo ...
Ongororo Yekukurumidza Nongedzo Rudzi: Ificha Handle & Knob, Ificha Handle & Knob, Chiedza chakasarudzika chiitiko Mheji kurongedza: Y Nzvimbo Yepakutanga: Zhejiang, China Brand Zita: KOPPALIVE Model Nhamba: 6091 Chinyorwa: Brass Usage: ...
Koppalive fenicha yemahara wholesale inorema ...
Multifunction yekurara Hardware rustic jira hove ...
Dhizaini yemazuva ano tsika yakasarudzika yemhangura ine simba ...
Ruian Zhangshi Hardware Co, Ltd. yakavambwa muna 2013, iri muWenzhou, zhejiang mudunhu, padhuze ne Ningbo & Shanghai Port. Isu takasarudzika kugadzira mhando dzakasiyana dzekushomeka kwemba, fenicha, kicheni kabhoni machira ezvemakumi emakore, kusanganisira hinges, musuo, chivharo, mhete yekubata nezvimwe zvakawedzera mamirioni pcs ezvibodzwa zvegore rese. Tine huwandu hwevashandi vakasarudzika veTechnical staff nemaneja, uye anopfuura mashanu ekugadzira munhu. Saka isu ndevedu vega chigadzirwa dhizaini, kuvandudza mitsva yakasarudzika uye yakatanhamara masitimi kusangana nemushandisi wakasununguka ruoko kunzwa. Isu tinokunda kukosheswa kubva kune vatengi kubva mudzimba uye mukati.
Isu tinogashira michina yemazuva ano yakangwara, yeinoshanda yekugadzira, inoteedzera mukurumbira mumhando yezvigadzirwa uye chirongwa chekuisa, ramba uchivandudza maitiro ekugadzirisa, kugadzira maitiro uye kusangana nezvinodiwa zvevatengi kubva kumatengi epasi rese. Isu tine mukana mukuumbwa kwekuumbwa, CNC machining, yekugadzira maitiro, mukuti mutengo wedu wakaderera 3% - 5% kupfuura mamwe makwikwi.
Isu tinochengeta yakakwirira-inoshanda kutaurirana pamwe nemutengi, nguva dzose tora zvinodiwa nevatengi uye zano kuti uvandudze revhisi rebasa uye hunhu, zadzisa mirairo mune yakanaka uye huwandu. Tawana BV yekugadzira kugona kuongorora chitupa, ichawedzera kumusika wemakambani uye nekuwedzera kubatana kwenyika dzakawanda mumakore mashoma anotevera. Yedu kukosha kwekambani kambani ndeye "Kuvimbika kutanga, mhando yekutanga, mutengi kutanga, win-win mushandirapamwe", saka tinogona kuramba tichienderera mberi tichifambira mberi. Yedu kuvimbisa kumutengi yedu yakanaka sevhisi, yemakwikwi mutengo, zadzisa iyo yekurongeka neyemhando yepamusoro.
Brass Door Knobs, Bronze Brass Door Knobs, Solid Brass Door Knobs, Brass Lever Door Handles, Ificha Hardware Anobata, Midziyo Anobata Uye Mapfundo,